» कमेडी च्याम्पियनको फाईनलमा हिमेश पन्त
कमेडी च्याम्पियनको फाईनलमा हिमेश पन्त
८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०८:४३
मकवानपुर, ८ फागुन । नेपालको पहिलो स्ट्याण्ड अप कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’ को उत्कृष्ट ३ मा कमेडियन हिमेश पन्त छानिएका छन् । उत्कृष्ट ४ को प्रस्तुतिका क्रममा पर्फोमर अफ द राउण्ड घोषित हुँदै उनी उत्कृष्ट ३ अर्थात फाईनलमा प्रवेश गरेका हुन् । धादिङको जुगेखोला निवासी हिमेशले कमेडी च्याम्पियनको सेटमा फरक–फरक कमेडी प्रस्तुत गर्दै हँसाउँदै आएका छन् । सानैदेखि नेताहरुको आवाज निकाल्ने र कमेडी गर्दै आएका हिमेशले कमेडी च्याम्पियनमा आउनुपूर्व युट्युबमै कमेडी भिडियो बनाएका थिए तर त्यो नचलेको उनी बताउँछन् । त्यसपछि उनले करिब २ वर्ष युट्युबमार्फत नै सार्वजनिक हुने स्टाण्डअप कमेडी शो गरे । त्यहाँ राम्रो प्रशंसा कमाएका उनले कमेडी च्याम्पियनमा पनि सहभागीता जनाए । उनी राजनीतिका विषयमा कमेडी गर्न निकै सक्षम देखिन्छन् । उत्कृष्ट ४ को प्रस्तुतिका क्रममा पनि उनले राजनीतिलाई नै विषय बनाएर व्यङ्ग्य गरेका थिए । उनले नेताहरुको ढिलासुस्ती, अदक्षता, वृद्धभत्ता, अपुरो नारा लगायतका विषयमा कडा व्यङ्ग्य गरेका थिए । व्यङ्ग्य गर्ने क्रममा कन्ट्रोभर्सी समेत खेपेका उनले ती कन्ट्रोभर्सीलाई पनि चिर्दै कडा व्यङ्ग्य प्रस्तुत गरेका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
राउण्डको विजेता बनेका उनले विभिन्न पुरस्कार सहित ईसेवाको तर्फबाट नगद २५ हजार रुपैयाँ र एक्सप्रेस सेवा सिड्नीको तर्फबाट पनि २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । उनले आफुले पुरस्कार पाएकोमध्ये २५ हजार रकम धुर्मुस र सुन्तलीलाई सहयोग स्वरुप प्रदान गरेका छन् । ३ पटकसम्म पर्फोमर अफ द राउण्ड हुन सफल हिमेशले फाईनलका लागि छानिएसँगै सबै दर्शक तथा शुभचिन्तकहरुलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत धन्यवाद दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटस यस्तो छ–साथीहरू हजुरहरूको साथ र सहयोगले गर्दा मैलै आफुलाई फेरि एकपटक प्रमाणित गर्न पाएँ । पर्फमर अफ द राउण्ड हुँदै म यसपटक कमेडी च्याम्पियनको को टप थ्री अर्थात फाईनलमा प्रवेश गरेको छु । यससँगै म ३ पटक पर्फमर अफ द राउण्ड पनि भएँ । आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूको सपोर्ट उत्तिनै रहनेछ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छु । बिचको २ एपिसोडमा डिमोटिभेट भएको कारण आफ्नो प्रस्तुति सोचेजस्तो नभएकै हो । तर उक्त परिस्थितिमा पनि मलाई भोट दिएर अगाडि बढाउने शुभचिन्तकप्रति धेरै धेरै धन्यवाद ।
नेगेटिभ कमेन्टसको पछाडि नलागी अगाडि बढ्न सुझाव दिने कमेडी च्याम्पियन टिम, डायरेक्टर विशाल भण्डारी दाई, मेन्टर्स र हौसला प्रदान गर्ने आदरणीय जजेजप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद । साथै कल नै गरेर कन्ट्रोभर्सीबाट नआत्तिकन पर्फम गर्न र नडराई अघि बढ्न मोटिभेट गर्ने रबि लामिछाने दाई प्रति विशेष धन्यवाद । किप लभिङ, किप सपोर्टिङ । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा कमेडी च्याम्पियनको पहिलो विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।